दम्पतीमा खटपट : हुन सक्छ डिप्रेसन | सुदुरपश्चिम खबर
दम्पतीमा खटपट : हुन सक्छ डिप्रेसन
– सम्बन्धमा आएको उदासीनताले व्यक्तिगत स्वभावमा परिवर्तन ल्याउँछ ।
– सम्बन्धका कारण हुने डिप्रेसनले दुवै व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । यस्तो अवस्थामा भावनात्मक हिसाबले असुरक्षित महसुस हुने र कोही व्यक्तिमा तनाव, उदासीनता र एकांकीपनबाट पनि ग्रसित हुन्छन् ।
– केही व्यक्तिहरू यस्तो अवस्थालाई सामान्य मानेर सामना गर्छन् तर केहि मानिसहरूसँग पीडा वहन गर्ने क्षमता हुँदैन । यस्तो अवस्थामा कहिलेकाँही यति तनाव हुन्छ कि यसले डिप्रेसनको अवस्था समेत सिर्जना गर्छ । एकै समयमा यसले तपाईंको अन्य शारीरिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि निम्त्याउन सक्छ ।
– सम्बन्धमा हुने विफलता र सम्बन्धका कारण हुने उदासीनताले तपाईंको परिवार र साथीहरूलाई समेत समस्या सिर्जना गराउँछ।
– यदि दम्पतीका बीचमा समस्याहरू समाधान गरिएको छैन वा सो परिस्थितिलाई ह्यान्डल गर्न तपाईं असमर्थ हुनुहुन्छ भने नजिकको साथी, परिवार वा अन्य व्यक्तिसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ ।
– कुनै समस्या कहिल्यै ठूलो नबनाउनुहोस्, कुराकानी गरेर चीजहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस् । सम्बन्धमा संवाद हुनु महत्वपूर्ण छ किनकि यसले तपाईंको सबै समस्याहरू समाधान गर्छ ।
– जब तपाईं सम्बन्धमा जोडिनुहुन्छ, त्यहाँ तपाईंले आफ्नो अहंकार छोड्नुपर्छ । किनभने धेरै पटक सम्बन्धमा फाटो आउने कारण आफ्नो अहंकार नै बन्ने गर्छ ।
– तपाईंको व्यवहारलाई थोरै लचिलो बनाउन प्रयास गर्नुहोस् ।
– कुनै पनि सफल सम्बन्धमा सबै सम्बन्धहरूलाई महत्व दिन महत्वपूर्ण छ ।
राम्रो र मीठो क्षणहरू सम्झनुहोस् जसले तपाईंलाई खुसी बनाउँछ । जस्तै, हाँसो ठट्टा वा साथीहरूसँगको अविस्मरणीय क्षण आदि । (अनलाइनखबर बाट सभार)
घर–आँगनमा रोपौं‌, औषधीय गुणले भरिपूर्ण यी वनस्पतिहरु !!
बाँसको तामा स्वादिलो मात्र होइन पौष्टिक र ओखती पनि !!